Fanjakana… matanjaka fa tsy manao jadona | NewsMada
Fanjakana… matanjaka fa tsy manao jadona
Mby aiza ny hoe fampiharana hentitra sy henjana kokoa ireo fepetra amin’ny fisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina coronavirus amin’izao? Efa ampolompolony ireo nosamborina sy nosaziana noho ny tsy fanajana fepetra, raha ny eto Antananarivo Renivohitra manokana, ohatra. Eo ny mpamily fiara fitateram-bahoaka sy ny mpanampy azy, ny olon-tsotra… Tao koa ny fiara fitateram-bahoaka giazina mandritra ny folo andro.
Inona na ahoana na aiza koa? Amin’izany, misy ny mamatrapatratra fa izay ahay: raha tsy voa tsy fay. Ao ny mitsara ambony ihany fa tafahoatra loatra ny ataon’ny fanjakana. Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny? Fa eo anatrehan’ny lalàna, tokony hitovy sy iray fijery ny rehetra. Izay no tsy mampandroso hatramin’izay? Za-dratsy sy tsy afa-bela amin’ny tsy fanarahan-dalàna, ka sahirana amin’ny fampiharana.
Ny fihetsaham-po no mandeha aloha? Na fidrikinana fotsiny izao hoe manao jadona ny fanjakana, tsy mamindra fo… Izay tsy fitoviam-pijery izay no mahavoa? Ekena, misy tokoa ny karazan’olona tsy manaiky ampiharam-dalàna: tsy tan-dalàna, mahitahita na mahalala olona, akaiky tompon’andraikitra… ? Izay indrindra no ilàna fanjakana mijoro, matanjaka, sahy, tsy miangatra… Tsy to teny raha mbola hita ho tsy marin-toerana?
Rehefa lalàna dia lalàna, tsy fidifidina izay ampiharina na izay olona ampiharana azy. Na iza na iza, na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana… Na ny mpampihatra lalàna aza, ohatra, no tsy manaja lalàna, mila iharan’ny lalàna. Efa iaraha-mahalala mialoha ny lalàna, ary tsy misy heverina ho tsy mahalala. Tsy vitan’izay, eo hatrany ny fampahatsiahivana sy fampitandremana amin’ny fampanjakana sy fampiharan-dalàna.
Izany rehetra izany no mampisy fanjakana matanjaka fa tsy manao jadona, ao anatin’ny fifampitokisana sy fifanajana tanteraka. Mba tsy tahotra ny fanajana lalàna fa famendrehana amin’ny maha olona noho ny fiarahamonina sy ny soa iombonana sy mampiombona: fandresena ny fahavalo… Vonona sy mahazaka izany ve ny rehetra amin’izao?